အိမ်ဖြူတော်ကို ၃၆၀ ဒီဂရီ Vritual Reality နည်းပညာဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ပြီ – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 3408 Views
အိမ်ဖြူတော်ကို ၃၆၀ ဒီဂရီ Vritual Reality နည်းပညာဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ပြီ
Ko Thuya Jan 15, 2017
၃၆၀ ဒီဂရီ Virtual Reality နည်းပညာကတော့ သင် မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသတွေကို တကယ် ရောက်နေသလို ခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသထဲ အလည်သွားချင်သလား ? ပင်လယ်ရေအောက် ရှုခင်းများကို ရေငုပ်ခံစားချင်သလား ? ဒါတွေအားလုံးကို VR နည်းပညာက ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်း သင် အိမ်ဖြူတော်ကို လည်ပတ်နိုင်ဖို့ VR နည်းပညာက ကူညီပေးလိုက်ပါပြီ။
မကြာခင်မှာ သက်တမ်းကုန်တော့မယ့် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက အိမ်ဖြူတော်ကို တကယ်ရောက်နေသလို ခံစားရမယ့် ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုကို ဖြန့်ချီပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုကို Oculus Rift , Gear VR , Facebook နဲ့ ၀က်ဆိုက်များမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အိုဘားမားက “ အိမ်ဖြူတော်ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတိုင်း ပိုင်တဲ့ နေရာပါ။ ဒီနေရာမှာ ၈ နှစ်ကြာ ကျွန်တော့် မိသားစု နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ “ လို့ ပြောပါတယ်။ Facebook ပေါ် တင်တဲ့ အခြား ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုများလိုပဲ အိမ်ဖြူတော် ဗီဒီယိုကို နှစ်သက်ရာ ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဟာ ၈ မိနစ် ကြာမြင့်ပြီး သမ္မတနေအိမ်ရဲ့ အထင်ကရနေရာများကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သမ္မတရဲ့ ဘဲဥပုံ ရုံးခန်းတောင် ပါပါသေးတယ်။
Motorola က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ပွဲအတွက် ဖိတ်စာများ ဝေငှ